Zuva: Chivabvu 12, 2020
Isu Tinofanirwa Kudzivirira iyo Indasitiri yeAnga
Vachitaura vachiti budiriro yeindasitiri yekufamba nendege inokanganisa kutumira zvinhu kunze kwenyika, Eskişehir OSB Mutungamiri Nadir Küpeli akati, "Zvakaitika muindasitiri yendege yenyika zvakatanga kukanganisa kutengesa kwedu kunze kwenyika, indasitiri yekufambisa ndege, rinova ziso reindasitiri yeEskişehir. Kudzivirira uye [More ...]
TCDD Inonyevera Nzira dzekupfira! Usasvikira Pamazuva gumi
Mune chirevo chakaitwa neTCDD, zvakataurwa kuti kupfapfaidza kuchaitwa muzvitima uye makero akatsanangurwa kwemazuva gumi haafanire kusvikwa. The Republic of Turkey State Railways (TCDD), pakati 10 May 14 June 1 by General Directorate of musi; Konya-Akşehir, [More ...]
Dzvinyiriro Dzinodzora yeKutenga Mall uye Veruzhinji Maseke mu Ankara
Ankara Metropolitan Municipality Mapurisa Dhipatimendi pamwe nevezveMapazi Dhipatimendi rezvoutano vakasimbisa kuongororwa kwavo mushure mekuvhurwa kweM Shopping Mall nemaRuzhinji Masiketi, ayo akavharwa kwenguva pfupi nekuda kwezvikonzero zve coronavirus kubvira 21 Kurume. vanhu [More ...]
Rutsigiro Rutsigiro Inoenderera mberi kweDolmuscu Tradesmen muA Ankara
Ankara Metropolitan Municipality Mapurisa Dhipatimendi inoenderera mberi nekutsigira vatengesi ve dolmus vane mabasa aderera nekuda kwekubuda kwe coronavirus. Pamusoro pekuuraya hutachiona mumadhibus, Ankara akatanga kugovera chikafu mapasuru nekuda kweRamadan. [More ...]
2/7 Asphalt Yakashambidzwa ye 24-Day Curfew muMusoro
Mukati medzero yekurwa kurwisa chirwere chekoronavirus, Ankara Metropolitan Municipality yakashanda makumi maviri nematatu pasereferi mumusi we2-zuva rekudzoka wakaziviswa muKutaundi guru. Kubva kuAltındağ kusvika kuÇankaya, kubva kuEtimesgut kusvika kuYenimahalle pamamepu makumi mashanu nemashanu eguta. [More ...]
Coronary Virus Isina Kugamuchirwa Setsaona Yebasa
Eskişehir Chamber of Industry Legal department akagadzirira chirevo chekuongorora pamusoro pemutemo wepamutemo wevanhu vari kubatwa nekubuda kwe coronavirus. Pamushumo kugadzirira, pamusoro pamutemo vanhu vanobatwa zviri coronavirus kubasa kana kunze kubasa. [More ...]
Yakaongororwa Kune hutano hwekufambisa
Kayseri Metropolitan Municipality mapurisa emapurisa kuongororwa uye ruzivo nezvekutevedza macoronavirus matanho anoenderera pasina kudzora. Vatyairi vematekisi vanoziviswa panguva ino nezvikwata zvemapurisa. Metropolitan Municipality mapurisa emapurisa anotora matekisi akamira [More ...]
Rechipiri Bazi Rakavhurwa Gültepe muVanhu Muzvitoro Zvekutengesa
İzmir Metropolitan Municipality yakavhura bazi yechipiri reHalkın Bakkalı, iro rakaiswa muKemeraltı Bazaar, kuGültepe Dunhu reKonak. Mutungamiri Tunç Soyer pakuvhura nekutora chikamu kwevashoma vanhu nekuda kwematanho eCoronavirus: “Chinhu chakakosha [More ...]
Kufarira kukuru muCinema Kuongorora Kunze! Zvakarekodha Zvakapera muna 19 Seconds
Kuongororwa kweinema yeIzmir Metropolitan Municipality musi wa15 Chivabvu Chishanu yakakwezva zvikuru. Kunyoreswa kwacho kwakapera mukati memasekonzi 19 pachiitiko, apo iyo "Mutengesi Musangano" bhaisikopo rinozoongororwa panguva imwechete pamatanho matanhatu. chiitiko [More ...]
Yemahara Yemahara Ekufambisa Kodzero dzeGendarmerie uye Coast Guard Staff
Gendarmerie neCoast Guard vashandi vakaverengerwa avo vanobatsirwa nezvifambiso zveveruzhinji mahara. Mutemo wePresident wakatanga kushanda musi wa 8 Chivabvu. Gendarmerie uye Coast kune vanoita zvemitemo vanofarira kushandiswa kwemahara kwekufambisa kwevanhu muTurkey [More ...]
Mukuvhiya kwakaitwa nebazi revashandi veCustoms forodha Forodha paKapıkule Forodha Gedhi, zviuru mazana manomwe nemakumi manomwe nenomwe nemazana manomwe ezviuru zvekurapa zvakabatwa. General Directorate yeCustoms Enforcing Operations [More ...]
The Scientific uye muruzivo rwokugadzira Research Council of Turkey (TUBITAK) achapiwa zvakaziviswa ne 2 Vashandi zvechigarire mune mutsara. Kuti unyorere kushambadza, zvakafanira kuti unyorese kuJoblem Application System pa “www.bilgem.tubitak.gov.tr”. (Tangazve nezvekushandisa [More ...]
"Vavhimi" vanotungamira vanotungamira pasi rose vanouya pamwechete kumisa kupararira kwechirwere mune ramangwana nekugadzira mapaipi ese emhuka dzesango izvo zvinogona kupinza vanhu mumhuka dzesango. Sayenzi yekubatana kwesangano inonzi Global Virome Project [More ...]
Coronavirus Yambiro kune Varwere Vemwoyo
Muzvinafundo Dr. Timur Timurkaynak akati, "Vanofanira kuchengetedza ropa ravo uye shuga vari pasi pesimba." Kugara uchigeza maoko chinhu chinofanira. Kuti uchengetedze immune system yakasimba, kugara uchirara, uine hutano, utano hweMedithera hwakadyiwa, doro rakawandisa [More ...]
BTS: 'Hatizo Nyarara Yekuchinjisa Sirkeci Port Area kuenda kuYeililay'
United Transport Empashandies Union (BTS) yakazivisa kuti mitsetse yekusvika pachiteshi uye nzvimbo dzekufambisa dzichashandiswa munharaunda yeSirkeci Port nenzvimbo dzekufambisa dzichashandiswa zvasvika padanho rekupedzisira rekugadzirira chirevo. BTS Central Executive Bhodhi [More ...]
Pakati penziyo dzekunze dzakarova, pane nziyo dzakanyatsobudirira. nziyo dzekunze, kunyangwe kana usingazive zvinoreva, unogona kuve nemimhanzi inonakidza uye inofamba. Naizvozvo, mazhinji acho ndevatorwa [More ...]
Şakir Zümre haana kunyora ndangariro dzake zvakadzama. Zvimwe haana kuwana nguva yekunyora. Şakir Zümre aive aine hunyoro. Haana kutaura nezvekunyika yekushandira kana hushamwari hwake naAtatürk. [More ...]
Iye akazvarwa musi waChikunguru 6, 1925, semubati wedunhu mudunhu reLice mudunhu reDiyarbakır. Rutivi rwaamai rwunobva kugungwa dema uye ruoko rwababa rwunobva pamhuri iri yedzinza raKayhan vakatanga kugara muBeazazı. Baba vake Asım bey akaberekwa muDiyarbakır muna 1924. [More ...]
PresidentBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakapa tsamba ine chekuita nesarudzo yekuchinjisa Galata Tower, inove mali yemapurovhinzi, kune Ministry of Culture uye Tourism. Zviri pachena kuti Mutungamiriri Imamoglu akanyorera Mehmet Nuri Ersoy, Gurukota retsika uye Tourism [More ...]
EGİAD Inoisa Iyo Hupfumi PaTafura
Aegean Youth Business Association EGİAD yakarongedza musangano wepawebhu pa "Macroeconomic Outlook Mukurwisa Kubuda" kukurukura uye kuongorora mhedzisiro yeCovid19 dambudziko rehupfumi. Munyori Mukuru wenhengo dzeEGİAD [More ...]
Mushure mekunge zviitiko zveCovit-19 zvatanga kuoneka, pakange paine kuderera kwehuwandu hwevanhu vaibuda mumugwagwa mukupera kwaKurume. Nekudaro, muvhiki yekupedzisira yaApril, kuwedzera kwe30,4 muzana zvakanyorwa zvichienzaniswa nekupera kwaMbudzi. Iperesenti yepakati pehuwandu hwevanhu [More ...]
Achasvikira Rudzi rweEvler 42 Kusvika Rini?
Basa riri kuenderera mberi paIzmit 42 Evler chiteshi pane mutsara mutsva pakati peArifiye nePendik unoshandiswa nechitima chepasi pasi. Chiteshi chinotarisirwa kuvhurwa muna Nyamavhuvhu. Maererano nenhau yaMuharrem Şenol kubva kuÖzgür Kocaeli; "Suburban chitima munzvimbo Izmit 42 Evler nharaunda [More ...]
Asphalt Kuisa paIzmit Gültepe Junction Yapera
Kuenderera mberi nekuedza kwayo kuita kuti zvifambe zvirinyore muguta rose, Kocaeli Metropolitan Municipality yakavezera matombo ekurongedza pamberi peOduevi pane Izmit Büyük Seka Tunnel svondo rapfuura. Sayenzi [More ...]
Yakamiswa Invoice Zvikumbiro Kutanga mu İzmir
Zvikumbiro zvatanga kugamuchirwa kwe "inomira invoice" application, iyo yakaiswawo muIzmir mushure meIstanbul. Vanyoreri, vane matambudziko ehupfumi nekuda kwedenda repasi rese, vanogona kuchengetedza mabhiri emvura muhurongwa kuburikidza ne "Biz İzmir" webhusaiti. [More ...]